Madaxweynaha Soomaaliya oo Fariin gaar ah u diray Shacabka ku dhaqan Gobolada Jubooyinka | Salaan Media
Home Wararka Madaxweynaha Soomaaliya oo Fariin gaar ah u diray Shacabka ku dhaqan Gobolada...
Madaxweynaha Soomaaliya oo Fariin gaar ah u diray Shacabka ku dhaqan Gobolada Jubooyinka
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Maanta Dalka dib ugu soo laabtay ayaa shir Jaraa’id uu garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ku qabtay waxa uu uga hadlay xaalada Gobolada Jubooyinka isagoona baaq u diray Shacabka ku dhaqan Goboladaasi.
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in shacabka Jubooyinka ay u madax banaan yihiin iney sameystaan maamulka ay doonayaan si ay uga mid noqdaan federaalka, doorka dowladana uu noqon doono iney arintaas u fududeeyaan si loo waafajiyo dastuurka dalka.
Madaxweynaha ayaa xusay in aysan Dowladu diidaneen in Gobolada Jubooyinka Maamul yeeshaan hasa haatee loo baahan yahay in maamulkaasi noqdo mid bulshada goboladaasi raali ka yihiin Dowladana ee gacan ka geesato fududeynta maamulkaasi iyo sidii loo heshiisiin lahaa dadka ku dhaqan Deegaanada Jubooyinka.
Madxaweynaha ayaana xusay in xiligan laga gudbay xiligii is qab qabsiga iyo kala aamin baxa , waxa uuna sheegay in isqab qabsiga iyo qabiil qabiil in la isku qabsado ay fursad siineyso Al-Shabaab in ay dib usoo noolaadaan ayna soo noqoto awoodooda Gobolada Jubooyinka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in xal ay umada Soomaaliyeed dhaxdooda keeni waayeen cid keeneysa aysan jirin aduunyadana ay ka caawin karto Soomaaliya kaliya dhinacyo kale sida hormarinta balse aysan marnaba aduunyadu keeni Karin xal ay Soomaali dhaxdooda keeni waayeen.
Hadalka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xili Magaalada Kismaayo ay ka jirto xiisad adag kadib markii Magaaladaasi looga dhawaaqay Madaxweynayaal aysan raali ka aheyn Bulshada Gobolada Jubooyinka kuwaa oo sheegaya in aayaha Jubooyinka iyaga lagala tashanayo dhinacna maray Nidaamka Dowlada Soomaaliya hada ku shaqeyso.